Waxaan ku martiqaadeynaa dukaamada ubaxa Floristum.ru
- macaamiil cusub oo bilaa lacag ah!
Floristum.ru waxay siisaa qalab wax ku ool ah oo lagu soo jiito macaamiil cusub oo loogu talagalay dukaamada ubaxa iyo kuwa ubaxleyda oo aan wax kharash ah ku bixin.
Adeeggu waa mid aad u fudud in la isticmaalo:
Usoo rar bouquets nidaamka.
Hesho amarro cusub.
Diiwaangelinta iyo shaqada nidaamka uma baahna wax lacag ah.
Looma baahna in lacag la geliyo nidaamka, intaa waxaa sii dheer, shaqada lacag dhigista lama bixin.
taas oo aan ka badnayn daqiiqad, isla markaana waxaad isla markiiba u soo gudbin kartaa ubaxyadaada Floristum.ru oo aad ku heli kartaa amarro cusub.
Shuruudaha ugu yar ee loogu talagalay qalabka farsamada ee ubaxleyda iyo dirista.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad kula shaqeyso nidaamka oo aad ku buuxiso amar waa taleefan kasta, xitaa badhanka riixa-fudud ee ugu fudud. Tani waxay suurtogal u tahay mahadnaq fudud, ogeysiis ergonomic SMS ku saleysan iyo nidaam maamul oo amar ah oo aan u baahnayn rakibidda codsiyada taleefannada ubaxleyda iyo wargeysyada.
Jawaab celinta macaamiisha dib u eegista.
Si loo kordhiyo iibinta, waxaa aad muhiim u ah in la fahmo sida uu macmiilku ugu qanacsan yahay ubax bixinta. Floristum.ru waxay ku dhiirigalinaysaa macmiil walba inuu ka tago fikradaha ku saabsan bouquet la helay.
Waxaad ku iibin kartaa ubaxyada Floristum.ru haddii:
Waxaad diyaar u tahay inaad u shaqeyso sidii hay'ad sharciyeed wareejinta bangiga.
Adigu waxaad leedahay adeegga gudbintaada ama waxaad lammaane ku tahay adeegyo gaarsiin kasta.
Waxaan ku raacsanahay komishanka nidaamka: 20% loogu talagalay bouquets, 10% ubaxyada gabalkiiba.
Waxaan u aragnaa dukaamada lammaanahayada sidan oo kale:
Wada-hawlgalayaasha Floristum.ru xaqiiqdii kama tagayaan macmiilkooda ubax la’aan, iyaguna had iyo jeer waa kuwo edeb leh oo aan ka baqaynin wax dhibaato ah. Dukaammada waxaa loogu talagalay inay si joogto ah u hagaajiyaan tayada shaqadooda, tayada adeegga, waxay diyaar u yihiin inay si wadajir ah ula horumariyaan bogga.
Waxaan ku dhiirigelinaynaa dukaamada leh dib u eegis wanaagsan:
On Floristum.ru, macaamiisha waxay uga tagi karaan jawaab celin inta ay jecelyihiin shaqada, sida ay ugu qanacsan yihiin tayada gaarsiinta. Waxay kaloo bixin karaan buundo ku habboon. Sida laga soo xigtay tirakoobyada, in ka badan kalabar macaamiisha ayaa sidan sameeya, waana sidan sida loo sameeyo qiimeynta dukaamada iyo farsamayaqaannada. Iyo aasaaskeeda, farshaxanno iyo dukaamo ubax oo leh qiimeyn sare ayaa ah kuwa ugu horreeya ee ka muuqda natiijooyinka raadinta goobta.